Dowladda Soomaaliya oo dalab u gudbisay IMF | KEYDMEDIA ENGLISH
Dowladda Soomaaliya oo dalab u gudbisay IMF
Wada-xaajoodka dib u cusboonaysiinta barnaamijka ayaa sidoo kale qayb ka ah heshiiska lagu dhimayo deymaha Soomaaliya lagu leeyahay oo ka badan 5 bilyan oo doolar.
NAIROBI, Kenya - Dowladda Soomaaliya ayaa ka codsatay hay’adda IMF in ay u kordhiso waqtiga laga sugayay inay dib u eegis ku sameyso barnaamijka taageerada dhaqaale oo laga sugayay 17-ka bishan May muddo saddex bilood ah ilaa 17-ka August.
Sida ay qortay Reuters, Haweenayda IMF u qaabilsan Soomaaliya Laura Jaramillo, ayaa ka digtay bishii Febuary in dib u dhaca doorashooyinka Baarlamaanka iyo Madaxweynaha ay sababi karto in la joojiyo taageeradda maaliyadeed.
Hay'adda Lacagta Adduunka waxay sheegtay in loo baahan yahay Soomaaliya inay yeelato dowlad cusub oo saxiixda cusboonaysiinta barnaamijka taageerada miisaaniyada saddexda sano ah, oo dhan ku dhawaad ​​$400 milyan, taasoo hadii aan la dooran Madaxweyne cusub bishan halis ugu jirto in si toos ah u joogsato.
Doorashada madaxtinimo Soomaaliya ayaa loo mudeeyay 15-ka May. Wasaaradda Maaliyadda Soomaaliya waxay warqad u dirtay IMF-ta oo ay kaga codsanayso in la siiyo waqti dheeraad ah si loo soo gabagabeeyo wadahadallada ku saabsan dib u cusboonaysiinta barnaamijka taageerada miisaaniyadda,
Comments Topics: imf soomaaliya
News 7 May 2022 9:33
US: The long-delayed election risks Somalia’s economic reform
News 28 March 2022 14:17
Somalia vows to sustain reform progress after IMF review mission
News 10 March 2022 11:07